लकडाउनका बेला भारतमा घट्याे देशै हल्लिने यस्तो घटना, अब के गर्लान माेदी ? — Sanchar Kendra
लकडाउनका बेला भारतमा घट्याे देशै हल्लिने यस्तो घटना, अब के गर्लान माेदी ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ ले अस्तव्यस्त बनेको भारतमा फेरी अर्को दुखद घटना घटेको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यको विशाखापटनममा राति विषाक्त ग्यास चुहावट हुँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । पाँच हजारभन्दा बढी मानिसमा विषाक्त ग्यासले असर गरेको र उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एलजी पोलिमर्स इन्डिया प्रालिको केमिकल प्लान्टबाट विषाक्त ग्यास चुहावट भएको हो । सन् १९६१ मा स्थापित यो प्लान्ट सुरुमा हिन्दुस्तान पोलिमर्सको स्वामित्वमा थियो । सन् १९९७ मा यो प्लान्ट दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘एलजी’ ले लिएको थियो ।बिहीबार बिहान करिब तीन बजेतिर एलजी पोलिमर कम्पनीबाट अचानक विषाक्त ग्यास फैलिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
स्थानीयबासी घरमै सुतिरहेको समयमा ग्यास फैलिएको बताइएको छ । एक्कासी श्वास फेर्न कठिनाई हुने, बान्ता हुने, आँखा पोल्ने जस्ता लक्षणसहित मानिसहरु घरबाहिर निस्कन थालेका थिए ।
एलजी पोलिपर्स कारखानाको करिब तीन किलोमिटर दायरामा विषाक्त ग्यास फैलिएको बताइएको छ । ग्यास कसरी चुहियो भन्नेबारे प्रष्ट भइसकेको छैन ।अधिकारीहरुका अनुसार बिहीबार बिहानै ग्यास चुहावट प्रकरणमा एलजी कम्पनीविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले मुद्दा दायर
यस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोक्न विश्वभरका वैज्ञानिक यसविरुद्धको खोप निर्माणका लागि कडा मेहनत गरिरहेका छन् । विशेषज्ञहरुका अनुसार अहिले जुन गतिमा अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो असाधारण छ । कहिलेकाहीँ कुनै खोप निर्माण गर्दा दशकौं पनि लाग्ने गर्छ ।
उदाहरणको लागि इबोला खोपलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । इबोलाको खोपले हालै मात्र प्रयोगको लागि अनुमति पाएको छ । यो खोप विकासको लागि १६ वर्ष लागेको थियो । खोप विकासको क्रममा धेरै चरण पार गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । पहिलो चरण प्रयोगशालामा हुन्छ । त्यसपछि यसको प्रयोग जनावरहरुमा गरिन्छ । यसको प्रयोग सुरक्षित छ भन्ने पुष्टि भएपछि मात्र मानिसमा सुरु गरिन्छ ।
प्रयोगको तेस्रो चरणमा खोप कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ । अहिलेसम्मको खुसीको कुरा कोभिड–१९ को खोप निर्माणको काम गरिरहेको ९० प्रतिशत अनुसन्धान टोलीले तीन महिनाभित्रै मानिसमा परीक्षण शुरु गरिसकेका छन् । यसलाई खोप निर्माणमा निकै महत्वपूर्ण सफलता मानिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध निर्माण चलिरहेका खोप यस्ता छन् :
इनोवियो र मोडर्नाको प्रयोग अहिलेसम्मकै नयाँ हो । यी खोपमध्ये एउटा आनुवंशिक संरचना परिवर्तन र अर्को त्यसमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथमा निर्माण गरिएको छ । जर्मनीका डाक्टर फेलपे टापिया अहिलेसम्म यी दुवै प्रविधिको माध्यमबाट कुनै खोप नबनेको बताउँछन् । यस्तोमा खोपको नयाँ आशा पलाएको भए पनि यसको प्रयोगमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म मोडर्नालाई आरएनएमा आधारित खोप निर्माणको अनुमति पनि छैन । त्यसैले कम्पनीले नै उत्पादन र मार्केटिङमा जानु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताइसकेको छ । चीनमा पनि अहिले तीन खोप निर्माणको लागि मानिसमा परीक्षण चलिरहेको छ । चीनमा निर्माण भइरहेका खोपमा भने पारम्परिक तरिकाको प्रयोग भइरहेको छ ।